Shan Shui Plaza ရောနှောအသုံးပြုမှုဗိသုကာဗိသုကာ - ဒီဇိုင်းမဂ္ဂဇင်း
စီမံကိန်းအမည် : Shan Shui Plaza, ဒီဇိုင်နာနာမည် : AART. AT Design, သုံးစွဲသူ၏အမည် : AART. AT design consultant company.
ရောနှောအသုံးပြုမှုဗိသုကာဗိသုကာ AART. AT Design Shan Shui Plaza